स्वस्थ र फिट रहनका लागि खानैपर्ने कुराहरु !! | सुदुरपश्चिम खबर
स्वस्थ रहनका लागि नियमित रुपमा फिट राख्ने खानेकुरा खाने गर्नुपर्छ । शरीर फिट राखेमा शरीर पनि स्वस्थ रहन्छ ।
जसका लागि यी खानेकुराको सेवन गर्नुस्ः
दही प्रोटिन र पेट अनुकुल ब्याक्टेरियाले भरिएको हुन्छ । यसमा क्याल्शियम, पौष्टिक तत्व, भिटामिन बी२, भिटामिन बी१२, पोटाशियम र म्याग्नेशियम जस्ता तत्वहरु पाइन्छ । दहीले पाचन प्रक्रियालाई सक्रिय बनाउँछ र शरीरलाई स्वस्थ राख्छ ।
अलग–अलग रङका दालमा भरपुर पोषक तत्व पाइन्छ । दालमा फाइबर, प्रोटिन जस्ता पदार्थहरु पाइन्छ । यसले पाचन तन्त्र स्वस्थ राख्छ, नयाँ कोशिकाहरु निर्माण गर्छ । दालमा भिटामिन ए, बी, सी, ई, म्याग्नेशियम, आइरन र जिंक आदि पाइन्छ ।
तरकारीमा प्रयोग गरिने मसलाले स्वास्थ्यलाई निकै फाइदा गर्छ । यसमा दुखाई कम गर्ने, रोगसँग लड्ने, एन्टि अक्सिडेन्ट, रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने आदि काम गर्छ । बेसार, दालचिनी, मेथी, मरिच जस्ता मसलाहरु खानु फाइदाजनक हुन्छ ।
लसुनले स्वास्थ्यमा फाइदाजनक हुन्छ । यसले रक्तचापक कम हुने, कोलेस्ट्रोल जस्ता समस्याहरु कम गर्छ । यसले रोग प्रतिरोधी क्षमता पनि बढाउँछ । (रातोपाटी बाट सभार)
राजयोग लिएर जन्मेका हुन्छन् यी ४ राशिका व्यक्तिहरु, तर हुन्छन् असाध्यै जिद्धी !!
महाअल्छी हुन्छन् यी राशिका व्यक्तिहरु, तपाईको कुन ?